स्वास्थ्य /जिबनशैली – Krazy NepaL
शरीरको विभिन्न भागमा जस्तै घाँटी, गर्दन, हात, पाखुरा वा अन्य भागमा आउने दाद एक जटिल समस्या हो। दाद जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा पनि देखिने समस्या हो। दादबाट छुटकारा पाउनको लागि जत्ति औषधी उपचार गरे पनि यो बारम्बार बल्झिरहने हुन्छ। दादको औषधी उपचार गर्न धेरै पैसाका साथ समय पनि खर्च हुन्छ तर यो पूर्ण रुपमा भने निको नहुने र बारबार बल्झिने समस्याले सताईरहेको हुन्छ । आज हामी यस्तो अचुक घरेलु उपचार विधिको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ, जसले पुरानो भन्दा पुरानो वा जिद्धी दादलाई सधैँका लागि हटाउन मद्धत गर्दछ। बनाउने विधि: सुरुमा एउटा वा आधा तीते करेलालाई सानो सानो टुक्रामा काटी यसलाई पिसेर पेस्ट बनाउने। अब एउटा सफा कचौरामा एक चम्चा नरिवलको तेल र एक दाना कपुरलाई पाउडर बनाएर मिसाउने। कपुर ९पुजा गर्न प्रयोग गरिने० नरम हुने भएकोले हातले नै पाउडर बनाउन सकिन्छ। यी दुई सामग्रीलाई राम्ररी मिसाईसकेपछी यसमा
जैविक कारणले पनि महिलाको स्वास्थ्य पुरुषको तुलनामा अलि बढी संवेदनशील हुन्छ । जसका कारण पुरुषमा भन्दा केही बढी स्वास्थ्य समस्या महिलामा देखिने गर्छ । यसमा पनि प्रजनन उमेर समूहका महिलालाई सामान्यदेखि जटिल स्वास्थ्य समस्याले सताई नै रहन्छ । यी हुन् महिलामा देखिने पाठेघरसम्बन्धी केही स्वास्थ्य समस्या : पाठेघर झर्ने महिलामा देखिने प्रमुख स्वास्थ्य समस्यामध्ये पाठेघर झर्ने एक हो । विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा यस्तो समस्या बढी मात्रामा देखिने गर्छ । सन्तान जन्माएका, उमेर नपुगी गर्भवती भएका, सुत्केरी भएको ६ हप्ताभन्दा अगाडि नै जटिल शारीरिक काम गर्दा, गर्भवतीको अवस्थामा पौष्टिक आहार नलिँदा यस्तो समस्याले सताउने गर्छ । पाठेघरमा ट्युमर महिलामा देखिने अर्को जटिल समस्या भनेको पाठेघरमा ट्युमर पनि हो । शरीरमा हर्मोनको मात्रा बढी भएमा यस्तो ट्युमरको समस्या हुने गर्छ । यो एउटा आनुवं
कतिपयको आँखाको तल्लो भागमा कालो धब्बा र घेरा बस्छ । आँखामुनि कालो हुनुको कारण हामी निन्द्रा नपुगेको बुज्ने गर्छौ तर विभिन्न भिटामिनहरुको कमिले गर्दा त्यस्तो दाग बस्ने गर्छ । आँखामुनि देखिने कालो घेरा अर्थात् डार्क सर्कलका कारण केही महिला आफू नराम्री नभएको महसुस गर्छन् । विभिन्न कारण र खानेकुराको कमीले आँखामुनि कालो घेरा बस्छ । पर्याप्त मात्रामा निद्राको कमी, कामको चाप र अत्यधिक तनावका कारण आँखामा डार्क सर्कल (कालो घेरा) देखा पर्छ, जसले हाम्रो सौन्दर्यमै ह्रास ल्याइदिन्छ । केही खानेकुराको सेवनबाट डार्क सर्कलबाट बच्न सकिन्छ । खासगरी, भिटामिनको कारणले आँखावरिपरि डार्क सर्कल देखा पर्ने गर्छ । भिटामिन ए : भिटामिन एयुक्त खाना खाँदा छालाको ‘रिपेयरिङ’ र ‘टाइटनिङ’मा टेवा पुग्छ । साथै, छालामा रक्तसञ्चार पनि तीव्र हुन्छ। त्यसैले डार्क सर्कल हुनेहरूले गाजर, फर्सी, पाकेको मेवा, आँप, हरियो सागप
शरीर गोरो बनाउने चक्करमा हामीले विभिन्न चीजको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। जसले छालालाई गोरो नभई कालो बनाइरहेको हुन्छ। आज हामी तपाईलाई अनुहार कालो बनाउने केही यस्ता बस्तुका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । अनुहारमा नलगाउनुहोस् यी चीज कागती : यसमा पाईने साइट्रीक एसिडले अनुहारको चमक कम हुन्छ । जसले छालाको कालोपन बढाउँछ। बियर : बियरको एसिडिक नेचरले छाला सुख्खा हुन्छ । यसलाई दिनहुँ प्रयोग गर्नाले छालाको चमक कम हुनथाल्छ। बेकिंग सोडा : यसमा पाईने अल्केलाइड्सले छालाको पीएच लेभल सन्तुलित रहँदैन । यसले छालामा दाग,धब्बा बन्छ र चमक कम हुन्छ। पुदिना : यसमा मेन्थोल हुन्छ। यसले अनुहारको नरमपन कम गर्छ र कालोपन बढ्छ। सुन्तला : सुन्तला र यसको बोक्रामा साइट्रीक एसिड हुन्छ। यसले छालाको रंग कालो हुन्छ। के लगाउने ? अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउनका लागि समय समयमा काँचो दूध लगाउनुहोस् जसले सुख्खापना कम
सामान्यतः बाथको समस्या बढी महिलालाई देखिन्छ भने पुरुष पनि यसका शिकार हुन्छन् । बाथ हुँदा जोर्नी दुख्छ र सुन्निन्छ । यसका लागि उपचार र पेनकिलर्स दिइन्छ । तर अनुसन्धानहरुबाट के देखिएको छ भने यदि बाथ बढाउने खालका खाना खाइएको छै भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बाथ धेरै प्रकारका हुन्छन् । तिनमा ओष्टियो बाथ र रुमाटाइड बाथ बढी भएको पाइन्छ । ओष्टियो बाथ औंला, घुँडा तथा हिपमा हुन्छ भने रुमाटाइड बाथ खुट्टाको जोर्नीमा हुन्छ । यसले ती अंग चलाउन पनि गा¥हो हुन्छ । परिवारमा पहिला कसैलाई बाथ भएको छ भने यसको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बाथको लक्षण जोर्नी दुख्ने सुन्निने अंगले काम गर्न समस्या हुने रातो हुने के गर्ने ? आराम गर्ने चिसो या तातोले सेक्ने तौल कम गर्ने शारीरिक अभ्यासमा जोड दिने जोर्नी प्रत्यारोपणको उपचार फ्राइ गरेको या प्याकेटको खाना अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार बाथ
शरीरको विभिन्न भागमा जस्तै घाँटी, गर्दन, हात, पाखुरा वा अन्य भागमा आउने दाद एक जटिल समस्या हो। दाद जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा पनि देखिने समस्या हो। दादबाट छुटकारा पाउनको लागि जत्ति औषधी उपचार गरे पनि यो बारम्बार बल्झिरहने हुन्छ। दादको औषधी उपचार गर्न धेरै पैसाका साथ समय पनि खर्च हुन्छ तर यो पूर्ण रुपमा भने निको नहुने र बारबार बल्झिने समस्याले सताईरहेको हुन्छ । आज हामी यस्तो अचुक घरेलु उपचार विधिको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ, जसले पुरानो भन्दा पुरानो वा जिद्धी दादलाई सधैँका लागि हटाउन मद्धत गर्दछ। २. बनाउने विधि: सुरुमा एउटा वा आधा तीते करेलालाई सानो सानो टुक्रामा काटी यसलाई पिसेर पेस्ट बनाउने। अब एउटा सफा कचौरामा एक चम्चा नरिवलको तेल र एक दाना कपुरलाई पाउडर बनाएर मिसाउने। कपुर ९पुजा गर्न प्रयोग गरिने० नरम हुने भएकोले हातले नै पाउडर बनाउन सकिन्छ। यी दुई सामग्रीलाई राम्ररी मिसाईसकेपछी य
काठमाडौँ । सबै मानिसको चाहाना आफ्नो अनुहार सुन्दर होस् भन्ने हुन्छ । अनुहारमा कुनै प्रकारको दाग आयो भने मानिसको सुन्दरता हराउने गर्छ । यसले गर्दा मानिसहरु निकै चिन्तामा रहने गर्छन् । अनुहारमा देखा पर्ने दाग हटाउन विभिन्न प्रकारका क्रिमहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर, बजारमा पाइने यस्ता क्रिमहरुले छालालाई असर गर्छन् । त्यसैले हामीले यस्ता क्रिमहरु बडी मात्रामा प्रयोग गर्न हुदैन । हामी हाम्रो अनुहारमा देखापर्ने दागहरु घरेलु उपचारका माध्यमबाट हटाउन सक्छौं । अनुहारमा देखापर्ने दाग हटाउन मद्धत गर्ने घरेलु उपायहरु यस्ता छन् स् १. कागतीको रस दाग भएको ठाउँमा कागतीको रस लगाएर आधा घण्टापछि सफा पानीले सफा गरेमा दाग हराउँदै जान्छ । नतिजा देखापर्न दुई÷तीन महिनासम्म नियमित कागतीको रस लगाउने गर्नुपर्छ । २.स्ट्रबेरी पाकेको स्ट्रबेरीको पेस्ट बनाई नियमित दाग भएको ठाउँमा लगाउने र १५ मिनेटपछि चिस